KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bicol Bislama Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Croatian Czech Dangme Danish Dutch English (Borɔfo) Estonian Ewe (Awona) Faroese Fijian Finnish Fon French Ga (Nkran Kasa) Galician Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Javanese Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Low German Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Maya Mfantse Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tongan Totonac Tsonga Turkish Twi Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Valencian Venda Vietnamese Wallisian Welsh Xhosa Yoruba (Alata) Zapotec (Isthmus) Zulu
2018 Ɔsom Afe * Akontaabu
Jehovah Adasefo dodow a wɔwɔ wiadze nyina
Nsaase dodow a Jehovah Adasefo kã asɛmpa no wɔ do
Woananom na hom kan hɔn kã hom sommufo no ho?
Nyimpa a wɔkã Nyankopɔn n’Ahenman no ho asɛmpa bosoom biara no nkotsee na yɛkan hɔn kã Jehovah Adasefo ho. (Matthew 24:14) Iyinom mu binom nye hɔn a wɔama woenuma hɔn dɛ Jehovah Adasefo, nye hɔn a wonnumaa hɔn naaso wɔafata dɛ wɔyɛ asɛmpaka edwuma no bi.
Aso ɔsɛ dɛ obi yi sika ana oeetum abɛyɛ hom som no munyi?
Oho. Wɔ hɛn som no mu no, dɛ bi a wɔbɛkan obi akã Adasefo no ho anaa obenya dwumadzi anaa hokwan pɔtsee bi no mmfa sikasɛm ho hwee. (Ndwuma 8:​18-​20) Nokwasɛm mpo nye dɛ, hɔn a woyi ntoboa no mu pii nnda hɔnho edzi. Ɔdasefo biara dze ne mber, n’ahoɔdzen nye n’ahodze boa wiadze nyina edwuma no, dɛ mbrɛ ne nsɛm tsebea tse nye mbrɛ noara pɛ.​—2 Corinthfo 9:7.
Hom yɛ dɛn hu nyimpa dodow a wɔdze hɔnho hyɛ asɛmpaka edwuma no mu?
Bosoom biara no, Adasefo no ankasa fi hɔn pɛ mu dze asɛnka a wɔyɛe no ho akontaabu ma hɔn asafo a wɔwɔ mu no.
Asafo biara kekã n’akontaabu no bɔ mu, na afei, wɔdze mona edwumayɛbea nkorbata a ɔhwɛ hɔn do no. Nkorbata biara so kekã n’akontaabu ahorow no bɔ mu, na afei, wɔdze mona wiadze nyina edwumayɛbea tsir no.
Wɔ ɔsom afe biara n’ewiei no, * wɔhwɛ dɛ mbrɛ Adasefo a wɔwɔ asaase biara do no hɔn dodow akɔ sor ekodu. Afei wɔkekã dɛm akontaabu ahorow yi nyinara bɔ mu na ama woeehu Adasefo dodow a wɔwɔ wiadze nyina. Wɔda ɔman biara n’asɛnka akontaabu nye ne nkyekyɛmu ahorow edzi wɔ wɛbsaet yi do. Wɔato dɛm ɔfã no dzin “Around the World.” Dɛm amandzɛɛbɔ ahorow yi hyɛ hɛn nkuran, dɛ mbrɛ amandzɛɛbɔ ahorow a ɔtsetse dɛm hyɛɛ Christianfo a wodzi kan no nkuran no ara.​—Ndwuma 2:​41; 4:4; 15:3.
Aso hom kan hɔn a wɔnye hom ahyehyɛdze no bɔ, naaso wɔnnkɔ asɛnka no kã hom sommufo no ho anaa?
Ɔwɔ mu dɛ yɛnnkan dɛm nkorɔfo yi nnkã Adasefo no dodow ho dze, naaso yɛgye hɔn fɛw do ba hɛn asafo ahorow no mu. Iyinom mu pii ba Christ wu ho Nkaadzi no ase. Ntsi sɛ yɛtsew Adasefo no hɔn dodow fi hɔn a wɔbaa Nkaadzi no nyinara no hɔn dodow no mu a, yetum hu hɔn a wɔnye hɛn ahyehyɛdze no bɔ no hɔn dodow. Wɔ mfe 2018 mu no, hɔn a wɔbaa Nkaadzi no ase no nyinara dodow si 20,329,317.
Nyimpa pii mmba hɛn nhyiamu ahorow no bi, naaso wonya Bible adzesua a yɛnye hɔn yɛ wɔ fie a wonntua hwee no do mfaso. Wɔ mfe 2018 mu no, sɛ wɔkyekyɛ mu pɛpɛɛpɛr a, yɛnye nkorɔfo 10,079,709 yɛɛ ofie Bible adzesua bosoom biara, a adzesua no mu binom wɔ hɔ a, yɛnye ankorankor yɛe wɔ ber kor noara mu.
Ebɛnadze ntsi na aban no n’akontaabu a ɔkyerɛ Adasefo no hɔn dodow no yɛ kɛse sen hom akontaabu no?
Asoɛ a ɔhwɛ aban no ne nyimpakan do no taa bisa nkorɔfo ɔsom kor a wɔnye hɔn bɔ, na ɔno na wogyina do kyerɛ nyimpa dodow a wɔwɔ ɔsom bi mu. Dɛ nhwɛdo no, asoɛ a ɔhwɛ nyimpakan do wɔ U.S. no kã dɛ, aber a wɔrekan nyimpa no, “wɔhwɛ dɛ nyimpa a wɔrekan hɔn no bu hɔnho dɛ wɔyɛ ebɛn ɔsommunyi.” Afei so, nna akontaabu a wonya no “gyina hɔnankasa hɔn nsusui do, na nnyɛ nokwasɛm no ankasa do.” Dza ɔnye iyi bɔ ebira no, hɔn a wɔkã asɛmpa no kyerɛ afofor na wobu hɔn dwumadzi no ho akontaa nkotsee na yɛkan hɔn kã Jehovah Adasefo ho, na nnyɛ obiara a obu noho dɛ Ɔdasefo kɛkɛ.
^ nky. 2 Ɔsom afe hyɛ ase fi September 1 kesi afe a odzi hɔ no ne August 31. Dɛ mfatoho no, mfe 2015 ɔsom afe no hyɛɛ ase fiir September 1, 2014, besii August 31, 2015.
^ nky. 16 Ɔsom afe hyɛ ase fi September 1 kesi afe a odzi hɔ no ne August 31. Dɛ mfatoho no, mfe 2015 ɔsom afe no hyɛɛ ase fiir September 1, 2014, besii August 31, 2015.
Aso Obi Botum Apaw Dɛ Ɔnnkɛyɛ Jehovah Adasefo No Mu Kor Bio?
Ɔkwan Bɛn Do Na Wɔahyehyɛ Jehovah Adasefo Asafo Ahorow No?